Guddiyada Doorashooyinka Qaranka iyo Jubbaland Oo Kulmay. – STAR FM SOMALIA
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Dadban ee Federaalka Maxamed Xasan Cirro iyo Guddiga dowlad goboleedka Jubbaland u qaabilsan Doorashooyinka Labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka ayaa ku kulmay magaalada Kismaayo.
Waxa ay kawada hadleen sidii hirgelinta doorashooyinka si gaar ah tan Golaha Aqalka Sare BFS oo Guddiga Doorashooyinka Dadban DG Jubbaland uu diyaariyay goobta ay ka dhaceyso iyo xubnihii ka shaqeyn lahaa.
Kulankan ayaa la iskula gartay in la hirgeliyo qabsoomidda Doorashooyinka Labada Gole ee Baarlamaanka Federlka Soomaaliya.
Qoraal kooban oo Guddiga Doorashooyinka Dadban ee DG Jubbaland kasoo baxay ayaa lagu sheegay in keliya ay dhiman tahay in lagu dhaqaaqo Doorashada Senatarada Aqalka Sare Baarlamaanka Federaalka.
Dib u dhac ayaa ku yimid qabsoomidda Doorashada Golaha Aqalka Sare oo waqti ahaan loo asteeyay 25-kii July 2021, waxaana socda dedaallo kala duwan oo lagu dedejinayo qabsoomidda Doorashooyinka.